Indlu entle yeLake Lake
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJessika-Kina
I-chalet entle eqaqambileyo enefenitshala ngokupheleleyo, ikhitshi elivulekileyo, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala elinesilingi yecathedral, amagumbi okulala ama-3 (Iibhedi zikaKumkanikazi), amagumbi okuhlambela ayi-2, indawo yeofisi yabucala enedesika yokuma, kubandakanya isikrini (silungele umsebenzi okude!) igaraji. Uya kuba nokufikelela kwindawo enkulu yabucala enombono wegadi yethu, indawo yomlilo yangaphakathi / yangaphandle kunye nokufikelela kwethu ngasese echibini (iindlela ezinqumla ilizwe lokutyibilika ebusika), umgama wemizuzu emi-2 ukusuka ekhabhathini!
Indlu yechibi epholileyo yangoku entliziyweni yeendawo ezintle zaseLaurentians kunye neLanaudiere nayo yonke into oyifunayo ukuze uphile ubomi bechibi. Indlu yethu yimizuzu engama-75 (iikhilomitha ezili-135) ukusuka eMontreal, izinyuko ezimbalwa ukusuka ekungeneni kwechibi lethu labucala, kwaye ibekwe ngokucwangcisiweyo kufutshane neendawo ezimbini zokuchithela i-ski (La Réserve & Garceau). ISaint-Donat ibonelela ngehlabathi lendalo, i-adventure, kunye nokuzonwabisa, kubandakanya iGalufa, kunye neendlela ezininzi zokuhamba intaba kunye neePaki zeSizwe ezikufutshane.
Indawo efunwayo emva kweholide ebekwe kakuhle entliziyweni yengingqi yeLaurentians kunye neLanaudière, ilali yaseSaint-Donat yamkela abantu abathanda ngaphandle unyaka wonke. Kukho ngaphezulu kwe-1000 yeekhilomitha zeendlela zokuhamba kunye neendlela zokuhamba, ukutyibilika kwilizwe liphela, ukukhwela ikhephu, indlela kunye nokukhwela ibhayisekile entabeni, singasathethi ke ngokuhamba ngekhephu. I-Ski Garceau, iSki La Réserve, kunye neklabhu yegalufa yaseSaint-Donat bagqibezela ipotifoliyo yokuzonwabisa. Unyaka wonke, iPioneer Park yindawo enelungelo lokuqhelisela intaphane yemisebenzi!
Umbuki zindwendwe ngu- Jessika-Kina
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$394
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Donat-de-Montcalm